မော်တော်ဆိုင်ကယ် Timing ကွင်းဆက် 25H
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ၁။ မော်ဒယ် ၂၅ နာရီ ၂. ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်အဆင့်မြင့်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူပေးကုသမှုအတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်သည့်လိုင်း၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: 1.Model: 428HO 2. ထုတ်ကုန်များသည်မြင့်မားသောကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောအပူပေးစနစ်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်းသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Drive Chain 520H
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၅၂၀H ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူပေးကုသမှုအတွက်အအေးပေးသည့်အပူခါးပတ်ပတ်လည်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ထားသောလိုင်း၊ အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၅၂၀ ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူပေးကုသမှုအတွက်အပူပေးစက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်း၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Drive Chain 530
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၅၃၀ ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူအပူကုသမှုအတွက်အအေးခံစက်ခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသည်။ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Drive ကို Chain 428H
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: 1.Model: 428H 2. ထုတ်ကုန်များသည်မြင့်မားသောကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောအပူပေးစနစ်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်းသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၄၂၈ ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူအပူကုသမှုအတွက်အအေးပေးသည့်အပူခါးပတ်ပတ်လည်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသည်။ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: 1.Model: 420H 2. ထုတ်ကုန်များသည်မြင့်မားသောကာဘွန်မန်းဂနိစ်စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်မားသောအပူပေးစနစ်အတွက်အလိုအလျောက်အပူကုသမှုကွက်ကြိုးခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောတပ်ဆင်ရေးလိုင်းသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Drive Chain 420
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ၁။ မော်ဒယ် ၄၂၀ ၂။ ထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်မန်းဂနိစ်စတီးများ၊ အပူပေးကုသမှုအတွက်အအေးပေးသည့်အပူခါးပတ်ကိရိယာများနှင့်ထိုင်ဝမ်မှတင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများသည်အမြင့်ဆုံးဝန်၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသည်။ ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်း။ ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုး
အကောင်းဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် drive ကိုကွင်းဆက်, အတိုချုပ်တိကျသောကြိတ်စက်ကွင်းငယ်များ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်း Chain, Chain Driven Motorcycles, တိကျသော roller ကွင်းဆက်, Right Side Chain Drive မော်တော်ဆိုင်ကယ်,